Amazon Kindle မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ဖတ်ကြမယ် — MYSTERY ZILLION
Amazon Kindle မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ဖတ်ကြမယ်
Amazon က ထုတ်တဲ့ Kindle ebook reader တွေကတော့ နာမည်ကြီးတွေပါ။ စာအုပ်တွေ အလွယ်တကူ ဒေါင်းလော့ လုပ်နိုင်တာ၊ စာအုပ်အမျိုးအစားစုံ ရနိုင်တာ၊ အမေရိကမှာဆိုရင် Library မသွားပဲ kindle ebook reader လေးရှိရုံနဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေက စာအုပ်ငှားနိုင်တာ စသဖြင့် အားသာချက်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဘယ်လိုပင်အားသာချက်တွေ များများပေါ့လေ၊ kindle ebook reader လေးတွေပိုင်တဲ့ မြန်မာတွေကတော့ မြန်မာဖောင့်နဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို kindle ပေါ်မှာ ဖတ်ချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေသိ အဲလိုမျိုးစာအုပ်တွေက Amazon ၀ဘ်ဆိုဒ် မှာလဲ မရနိုင်၊ ပိုဆိုးတာက kindle က မြန်မာဖောင့်ကို ကောင်းကောင်း support မလုပ်နိုင်တာပါ။ ကောင်းကောင်း support မလုပ်နိုင်လို့ရေးရတာက ဇော်ဂျီဖောင့်ဆိုရင် ဖတ်လို့ကိုမရပါဘူး။ ယူနီကုဒ်ဖောင့်ဆိုရင်တော့ “က၊ ခ၊ ဂ၊ … အစရှိသဖြင့် ၃၃ လုံးသော အက္ခရာတွေက ကောင်းကောင်းပေါ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ခြား ယပင့် တို့ ဘာတို့လည်း ပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက် ယူနီကုဒ်ဖောင့်စာတွေ ကို ကောင်းကောင်းမဖော်ပြနိုင်တာက ယရစ်တို့၊ သေ၀ထိုးတို့ပါ။ screen shot လေးတွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင် ပိုရှင်းပါတယ်။
ယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေကို ဘာ customize မှမလုပ်ပဲ ဖတ်လို့အနည်းငယ်ရနေတော့ ဖောင့် customize လုပ်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိပါရော။ အဲလိုနဲ့ပေါ့လေ … ကျွန်တော်လည်း kindle မှာ ဖောင့်ကို ဘယ်လို customize လုပ်လို့ရမလဲ ဆိုပီး အားရင် google ကနေ ရှာဖွေပါတော့တယ်။ တွေ့တဲ့ဆိုဒ်တွေကတော့ မျိုးစုံပါပဲ။ hack လုပ်ပီး font နဲ့ screen saver တွေပြောင်းတာတွေ တွေ့တယ်။ hack လုပ်ပီး တစ်ခြားလုပ်လို့ရတာတွေ လည်းရှိတယ်။ အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော်က ဒီနည်းပညာတွေအတွက် ဝါသနာရှင်အဆင့်ပဲရှိတယ်။ ပညာရှင်အဆင့်မဟုတ်လေတော့ kindle ကို hack လုပ်တာ ဘာတွေကောင်းလဲ၊ ဘာအကျိုးပိုရှိလဲဆိုတာ သေချာမသိပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ကလေးကို hack လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လဲ မလုပ်ချင်ပြန်ဘူး။ hack လုပ်ပီးရင်လဲ မြန်မာဖောင့်ဖတ်ရမယ်လို့ သေချာတာမှ မဟုတ်ပဲ နော့… ။ ရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့ kindle အတွက် alternative OS တစ်ခုသွားတွေ့ပါလေရော။ သူ့နာမည်က Duokan Lite တဲ့။ တရုတ်က ထွင်တာဗျ။ (တရုတ်ကတော့ သူများနောက်က ဟက်ကမယ်ဆို ထိပ်ပဲနော် :P)။ စိတ်၀င်စားစရာတစ်ချက်က သူကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် မူရင် kindle OS ကိုလည်း အချိန်မရွေး restart လုပ်ပီး အချိန်မရွေး ပြန်သုံးလို့ရတယ်တဲ့။ kindle ပေါ်မှာ dual software တင်ထားသလိုမျိုးပေါ့၊ ဒီတော့ ကျွန်တော် နဲနဲ စိတ်၀င်စားသွားတယ်။ နောက်ထပ်စိတ်၀င်စားစရာ အချက်က သူက kindle က support မလုပ်တဲ့ Epub format ebook တွေ support လုပ်တယ်ဆိုတာကိုး။ စိတ်၀င်စားမိတာက ဒီလို။ ကို saturngod ရဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ epub format မြန်မာစာအုပ်တွေ လုပ်လို့ရတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေ ဖတ်ဖူးတာကိုး။ ဒါနဲ့ စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပီး Duokan ကို install လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ ပီးတော့ တက်ကြွစွာနဲ့ပဲ ကိုsaturngod ဆိုဒ်က ရွှတိဂုံ ဆိုတဲ့ epub book လေးကို ဒေါင်းလော့ဆွဲပီး Duokan မှာ အားရ၀မ်းသာ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ….. လား လား…ဘာမျှမပေါ်ပဲ blank screen ကြီးပဲပေါ်နေပါလေရော။ (မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ပါလားနော် )။ ဒါပေမယ့် Duokan ရဲ့ကောင်းကွက်က pdf အတွက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။ kindle က မလုပ်နိုင်တဲ့ blank margin တွေ ဖျောက်ပစ်တာ၊ page ကို column တွေခွဲပီး ဖတ်ချင်ရင် ဖတ်လို့ရတာ…အဲဒါတွေတော့ အားသာချက်ရှိတာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာ pdf စာအုပ်တွေ ဖတ်မယ်ဆို ပိုကောင်းတယ် ပြောရမလားပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ google ပေါ်မှာ font customize လုပ်ဖို့ ရှာဖွေမှုကတော့ ရပ်မသွားသေးဘူး ခင်ဗျ။ ကိုယ်က software တွေအကြောင်း နကန်းတစ်လုံး နားမလည်လေတော့ တတ်တဲ့သူတွေ ရေးထားမလားဆိုပီး ရှာရတာပေ့ါဗျာ။ တစ်ရက် အဲဒီလို ရှာရင်းနဲ့ပဲ ဒီ mysteryzillion ဆိုဒ်မှာ kokoblackspy ဆိုတဲ့သူက Is Myanmar Unicode available for kindle? လို့မေးထားတာလေးတစ်ခုတွေ့တော့ အားရ၀မ်းသာ ဘယ်သူတွေများ အဖြေပေးထားမလဲလို့ ဖွင့်ကြည့်ပါလေရော။ အဲဒီမှာပဲ ကိုsaturngod ရဲ့ အဖြေကိုတွေ့လိုက်ရတော့ အားတော်တော် ငယ်သွားတယ်။
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ hack လုပ်စရာမလိုပဲ font customize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ တစ်ခုတွေ့လာတယ်။ hack လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့။ စစချင်း ယူနီကုဒ်ဖောင့် Myanmar3 နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ မူရင်း font customize မလုပ်ခင်က ဖတ်ရနေတာတောင် ဖတ်မရတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ပုံလေးတွေတော့ (screen shot) မှာ ကြည့်ပေးပါ။ နောက် ဖောင့်အကြောင်းလည်း နားမလည်တော့ font တစ်ခုထဲကိုပဲ အဲ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ ပြောတဲ့အတိုင်း နာမည် လေးမျိုး ခွဲပေးလိုက်တာ kindle ပါ hang သွားတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ zawgyi font နဲ့ စမ်းကြည့်တယ်။ wow…ဇော်ဂျီကို ကောင်းကောင်း display လုပ်တယ်ခင်ဗျ။ တော်တော် ပျော်သွားတယ်…ကိုယ့်ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်လေး အောင်မြင်တာကိုး။ အဲဒါနဲ့ kindle ရဲ့ user guide ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်လေးနဲ့ ဘယ်လို ပေါ်မလဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဖွင့်မရတော့ဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။ တော်တော် အဖြေရှာလိုက်ရတယ်။ အဓိကကတော့ font အကြောင်းနားမလည်လို့ font တစ်ခုထဲကို နာမည် လေးမျိုး ခွဲပီးပေးလိုက်လို့ ဖြစ်တာမှန်း ရှာတွေ့သွားတယ်။ မှားပုံက ဒီလို… font customize လုပ်ဖို့ ဆိုဒ်ရဲ့ အညွှန်းမှာက ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ font လေးမျိုးရှာပီး နာမည်ပြောင်းခိုင်းတယ်။ ကျွန်တော်က မသိတော့ zawgyi font တစ်ခုထဲကိုပဲ သူပေးခိုင်းတဲ့ နာမည် လေးမျိုး ဖြစ်တဲ့ alt-Regular.ttf, alt-Bold.ttf, alt-Italic.ttf, alt-BoldItalic.ttf ဆိုပီးပေးပစ်လိုက်တာ။ အားလုံးပဲ ဇော်ဂျီနဲ့ပေါ်စေပေါ့….ဟီး ဟီး…အဲလိုမျိုး နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်တာ။ ကဲ ကဲ…ကျွန်တော် နိဒါန်းပျိုးတာတွေ များသွားပီ။ ကျွန်တော့လိုပဲ kindle ပေါ်မှာ မြန်မာစာ ဖတ်ချင်သူတွေ အဆင်ပြေအောင် ဒီပိုစ့်လေး ရေးတင်လိုက်တာပါ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကိုတော့ မူရင်း ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာပဲ ၀င်ဖတ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော် link တွေ ထည့်ပေးပါမယ်။
သိပ်မခက်ပါဘူး။ သူက kindle ရဲ့ reader.pref ဖိုင်လေးကို edit လုပ်လိုက်တာပါ။ အဲဖိုင်လေးကို notepad ဒါမှမဟုတ် wordpad နဲ့ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ သြော်မေ့တော့မလို့…ကျွန်တော့လိုပဲ နည်းပညာနဲ့အလှမ်းကွာသူ လူတွေအတွက် kindle ရဲ့ system ဖိုင်ကို တွေ့ဖို့အတွက် Tools>>Folder Options>>Hide protected operating system files (Recommended) ကို uncheck လုပ်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ reader.pref ကို edit လုပ်ပီးပီဆိုရင်တော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ font file ကို create လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ fonts ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဘယ်နေရာမှာ create လုပ်ရမလဲဆိုတော့ ခုန system ဖိုင်တို့ document ဖိုင်တို့ တွေ့တဲ့ နေရာမှာ လုပ်ရမှာပါ။ fonts တွေကတော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ font တွေကို ရွေးပေးပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ fonts တွေကို ခုလို သုံးလိုက်တယ်…
alt-Regular.ttf - ZawgyiOne.ttf
alt-Bold.ttf	- Calibri Bold.ttf
alt-Italic.ttf	- Calibri Italic.ttf
alt-BoldItalic.ttf	- Calibri Bold Italic.ttf
ဒီနေရာမှာ alt-Regular.ttf အတွက် ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသုံးပီး ကျန်တဲ့ alt-Bold.ttf, alt-Italic.ttf, alt-BoldItalic.ttf font တွေက ကိုယ်သုံးချင်တာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ fonts folder ကို create လုပ်ပီးပီဆိုရင်တော့ kindle ကို ကွန်ပျူတာကနေ ဖြုတ်ပီး restart လုပ်လိုက်ပါ။ ပီးရင် ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုလောက် ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေနေတာ တွေ့ရမှာပါ။
ဗျာ….ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ဖိုင်ကို ဘယ်လို format နဲ့ kindle ထဲကို ထည့်ရမလဲ… ဟုတ်လား??? ဟုတ်ကဲ့ အလွယ်ဆုံး နည်းလေးတစ်ခု ပြောပြပါမယ်။ ကျွန်တော် ခုပြောမယ့်ဆိုဒ်လေးကိုလည်း googling လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ရှာတွေ့တာပါ။ ဆိုဒ်နာမည်က kindleit တဲ့။ အပြည့်အစုံကတော့ http://fivefilters.org/kindle-it/ တဲ့။ အဲဒီဆိုဒ်မှာ ပေးထားတဲ့ url ထည့်တဲ့ box လေးမှာ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ မြန်မာဆိုဒ်ပေချ့်လိပ်စာကို ထည့်လိုက်ပါ။ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတာတော့ ဖြစ်ပါစေနော်။ ပီးရင် preview ကို click လိုက်ပါ။ ပီးရင်တော့ send to ဆိုတဲ့ box မှာ ကိုယ့် kindle ရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးပါ။ @ နောက်ကဟာကိုတော့ free.kindle.com ကိုပဲ ရွေးပေးပါ။ ပီးတော့ဘယ် email ကပို့ချင်လဲဆိုတာ ထည့်ပေးပါ။ ပို့ချင်တဲ့ email က ကိုယ့် kindle အကောင့်ထဲမှာ approve ဖြစ်ပီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။ အဲဒါကိုတော့ Amazon web site မှာ Manage your kindle ရဲ့ personal document setting မှာ ၀င်ရောက်ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ အဲလိုပို့ပီးပီ ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ kindle မှာ wireless ဖွင့်ထားပီး sync & check for items ဆိုတာကို menu ဖွင့်ပီး ကလစ်လိုက်ရင် ခုနပို့ထားတဲ့ webpage က ကိုယ့်ရဲ့ kindle ထဲကို .azw format (kindle format) နဲ့ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ…ဒါဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ebook လေးတစ်ခု ရပီပေါ့။ ဟန်ကျလိုက်တာဗျာ …
ခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်တော့ ရွှအမြုတေ ၀ဘ်ဆိုဒ်က ၀တ္ထုတွေကို kindleit နဲ့ ခံစားနေပါကြောင်း
မှတ်ချက်။ ယူနီကုဒ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကိုလည်း ဇော်ဂျီဖောင့်ပြောင်း, google document မှာ paste လုပ်၊ ပီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ kindle ထဲကို email attachment အနေနဲ့ပို့ပီးလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ thevoiceweekly ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို အဲဒီလိုနည်းနဲ့ ဖတ်နေပါကြောင်း
PS: တစ်ခု သတိပေးဖို့ မေ့သွားတယ်ဗျ။ ဒီလိုပါ…ခုန ဇော်ဂျီဖောင့် ပြောင်းထားတာကို မပျက်စေချင်ရင် kindle ရဲ့ AA key ကနေ Type Face ကို သွားမချိန်းမိဖို့ပါပဲ။ ချိန်းမိရင်တော့ font customize လုပ်ထားတာ ပျောက်သွားပီး မူရင်း font နဲ့ပဲ ပြန်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုဖြစ်ခဲ့လို့ font customize ပြန်လုပ်ချင်လဲ မခက်ပါဘူး။ reader.pref မှာ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ဆိုဒ်တွေကလို Allow_User_Font=true ဆိုတာကို ပြန်ရေးလိုက်ရုံပေါ့။ တစ်ခြား Line spacing တွေ word per line တွေကိုတော့ ချိန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပီး font customize က kindle ရဲ့ Home Screen ကို affect ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Home screen ကတော့ နဂိုဖောင့်နဲ့ပဲ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံတွေအတွက် ရှင်းလင်းချက်လေးတွေ ကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပုံ၁။ kindle ရဲ့ Home မြင်ကွင်းပါ။ font customize ရဲ့ affect မသက်ရောက်ပါဘူး။ မြန်မာစာနဲ့ တွေ့ရတာတွေက ယူနီကုဒ်ဖောင့်နဲ့ပါ။ ပထမဆုံး မြင်ရတဲ့ မြန်မာစာကြောင်း “ရန်ကုန်ကို စင်ကာပူနဲ့ တူချင်တယ်ဆိုရင်” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကိုကြည့်ရင် kindle က မြန်မာ ယူနီကုဒ်ဖောင့် ကို ကောင်းကောင်း display လုပ်ပုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Reader Digest ခေါင်းစဉ်အောက်က “ကြီးပွားရေး မှန်ပြောင်း” ဆိုတာကိုကြည့်ရင်တော့ ယယစ်တွေ သေ၀ထိုးတွေကို ကောင်းမွန်စွာ မပြနိုင်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ ပတ်ဆင့်တွေကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ မပြနိုင်ပါဘူး။ (အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဆောင်းပါး ၂ပုဒ်၊ ၃ပုဒ် လောက် ပီးအောင် ဖတ်ပစ်လိုက်တယ် )။ ဒုတိယခေါင်းစဉ်က ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတာပါ။ သူကတော့ ဘာရေးထားမှန်းမသိရလောက်အောင်ကို ဖြစ်နေပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်အမှန်က ဖတ်စစ်ကလပ်ပါ။ ရွှအမြုတေက သာဓုရဲ့ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လို ပေါ်နေတာတွေကတော့ kindle ရဲ့ default ဖောင့်နဲ့ မြင်ရတာပါ။
ပုံ၂၊ ပုံ၃၊ ပုံ၄။ font customize လုပ်ပီးနောက် kindle ပေါ်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို မြင်ရပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင့်ဆိုဒ်လေးတွေ ချိန်းပြထားတာပါ။
ပုံ၅။ ဒီပုံကတော့ Zawgyi နဲ့ Calibri ဖောင့်တွေရဲ့ မြင်ကွင်းကို ပြထားတာပါ။ regular font တွေက ဇော်ဂျီ နဲ့ ပေါ်ပီးတော့ Bold နဲ့ Italic လုပ်ထားတဲ့ font တွေက Calibri နဲ့ ပေါ်နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ခုဒီပိုစ့်အတွက် Credit ပေးရမယ့်ဆိုဒ်တွေကတော့ ခုန အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေအားလုံးပါပဲ။ အဲဒီဆိုဒ်တွေမှာ ခုဒီပိုစ့်မှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအပြင် kindle နဲ့ဆိုင်တဲ့ တစ်ခြား အကြေင်းအရာတွေကိုလဲ ဆက်လက်လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများလဲ ခုဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပီး ထပ်မျှေ၀ချင်တာလေးတွေရှိရင် မျှေ၀ပေးကြပါလို့ ဒီနေရာကပဲ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ရတာတောင် တော်တော် မောသွားတယ်။
In Kindle Touch, no need to do anything. It can show Zawgyi font correctly in pdf format. But you know Kindle doesn't fit pdf format. So I tried to convert it to MOBI format. But failed, as the converter don't know zawgyi font.
ကျွန်တော်ကတော့ fonts တွေကိုမထည့်တော့ပဲ PDF file ပြောင်းဖတ်ပါတယ် PDF file ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ စာတစ်မျက်နှာစာ အတွက်ကို kindle size နဲ့ fix ဖြစ်အောင် font size ကိုကြီးကြီးထားပြီး ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေသွားပါတယ်
အခုလို ပြောပြတာ ကျေးဇူးပါ။ အားနာနာနဲ့ အကူအညီ ထပ်တောင်းမယ်နော်။
english font နဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့ တွဲထားတဲ့ စာမျက်နှာလေး တစ်ခုလောက် screenshot ပြပေးပါလား။
ဇော်ဂျီ အင်္ဂလိပ်ဖွန့်ကို သိပ်မကြိုက်လို့ မပြောင်းရဲ ဖြစ်နေလို့။ ပုံနံပါတ် ၅ မှာ ပါမှန်းတော့ သိပ်တယ်။ နောက်တစ်ပုံလောက် ကြည့်ချင်လို့ပါ။ နောက် အခု နောက်ဆုံး ဆော့ဝဲ update အဆင်ပြေပြေ လုပ်လို့ ရလား။ ပြဿနာတွေ ဘာတွေ တက်နိုင်လား။ Thanks.
လောလောဆယ်တော့ kindle က အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့လို့ နောက်တော့ တင်ပေးပါ့မယ်။ အပ်ဒိပ်လုပ်တာတော့ အခက်အခဲ မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်။ အပ်ဒိပ်လုပ်လို့ရမှန်း သတိတောင်မထားမိဘူး။ တကယ်လို့ အပ်ဒိပ်လုပ်ပီး မြန်မာဖွန့်ပျက်သွားလည်း ပြန်လုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရှိ ဇော်ဂျီဖွန့် ပြောင်းပီး သုံးနေတာတော ့ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ဇော်ဂျီ အင်္ဂလိပ်ဖွန့်တော့ ကျွန်တော်လည်း သိပ်မကြိုက်ဘူး။ မြန်မာစာလည်းဖတ်ချင်တော့ နိုးချွိုက်စ် ဖြစ်နေလို့...
Kindle Keyboard မှာရောမြန်မာလိုဖတ်လို.ရမရသိချင်ပါတယ်...
April 2013 edited April 2013 Registered Users
April 2013 Administrators
MZ can only accept Unicode.
@thantthuramg , MZ can only accept unicode. Now changed your text to unicode and please use unicode in future post.
Ah .. Yes .. I will use Unicode in future . And also please answer if have some idea to fix this solution
ကျနော် kindle keyboard မှာ အကိုပြောသလို အကုန်လုပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ခင်ကအတိုင်းလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာမှားနေလို့လည်း မသိဘူး။
ကျွန်တော် Kindle Basic Version4မှာစမ်းတာအဆင်မပြေဘူးဗျ..